अर्थमन्त्रीले १० दिन मागेपछि कपडा उद्योगीको आन्दोलन स्थगित, भोलिदेखि उद्योग खुल्ने ! « GDP Nepal
अर्थमन्त्रीले १० दिन मागेपछि कपडा उद्योगीको आन्दोलन स्थगित, भोलिदेखि उद्योग खुल्ने !
Published On : 18 November, 2018 11:00 pm
काठमाडौं । वैकल्पिक व्यवस्था नगरी भ्याट छुटको सुविधा हटाएको विरोधमा आन्दोलनरत कपडा उद्योगीहरुले उद्योग बन्दका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँगको छलफलपछि उद्योगीहरु आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन सहमत भएका हुन् । शनिबारदेखि उद्योग बन्द गरेका उद्योगीलाई अर्थमन्त्रीले आइतबार छलफलका लागि बोलाएका थिए ।
अर्थमन्त्रीले वैकल्पिक सुविधाका सम्बन्धमा अध्ययन गरी निर्णय गर्न १० दिनको समय माग गरेको र उद्योग बन्दका कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरेकाले आन्दोलन स्थगित गरिएको कपडा उद्योग संघका उपाध्यक्ष जीतेन्द्र लोहियाले बताए ।
छलफलमा सहभागी भएका उपाध्यक्ष लोहियाले भने– अर्थमन्त्रीले हाम्रो कुरा सुन्नुभयो र १० दिनको समय माग्नुभयो । हामीले पनि उहाँको आग्रहअनुसार त्यस बेलासम्मका लागि उद्योग बन्दको निर्णय स्थगित गरेका छौं र सोमबारदेखि उद्योग खुल्नेछन् ।
संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अर्थमन्त्रीको आश्वासनप्रति विश्वासका साथ कदर गरिएको उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा सहभागी व्यवसायीहरुका अनुसार अर्थमन्त्रीले व्यवसायीलाई उद्योग बन्दको निर्णय अलि हतारमा गर्नुभएको भन्ने टिप्पणी गरेका थिए । व्यवसायीले भने जेठदेखि कात्तिकसम्म बारम्बार आग्रह गर्दा पनि आफूहरुको कुरै नसुनेपछि बाध्य भएर बन्द गर्नुपरेको जवाफ दिएका थिए ।